Date My Pet » Sei Unoziva Muri In Love?
Last updated: Sep. 16 2020 | 3 Maminitsi verenga
Ndinorangarira pandakatanga kudanana. Uye ndinofunga chokwadi zvimwe ndechokuti munoziva mumwoyo yenyu pakarepo. Munoziva musiyano navose runoputsa nemanzwiro akasimba iwe waiva vanhu uye nzira unonzwa nezvazvo mumwe munhu. In vachiti, sei imi munoziva mamota pasi kuti zvikonzero shoma randakataura akanyorwa pazasi.
Kana uchida mumwe munhu uri panguva yako pangozi zvikuru. Unoda kuvafadza, kuadzidzisa, kuti vafare. Vanoti vanorasikirwa chikwama kwavanoita muenzaniso uri wokutanga vachitsvaka nokuti. Uye hazvisi nenzira iyoyo 'Oh, kuti murombo munhu akarasikirwa chikwama yavo.’ Zviri zvakawanda zvakadzama kupfuura. Imi hamugoni chinhu chakaipa kuitika kwavari. Vachiri zvakanaka munhu kuti chinhu chakaipa kuti zviitike kwavari. Havazivi vanokodzera chinhu chakaipa kuti zviitike kwavari. Ivo ndashama vachikukumikidzai manzwiro kuti iwe wakafunga hariko uye zviri zvikuru kupfuura iwe angadai akafungidzira. Iwe vanotanga kuwana kupinda mumhanzi Vakafanana. Haungazive, zvinongoreva kungava kutanga kukurukura. Uye kana rusina kukwana mberi, ngazvive zvakadaro. Mufaro iwe kubva munzira aunoita pamusoro pavo mukuru mumwe kurwadziwa (kana pedo kupenga!) kuti uri kunzwa nokuti haugoni kuva nazvo. Saka nyonyova ambopinda pane ngozi uye vakarasikirwa pazvose nezvavo zvimwe ndiyo nzira huru dzaunoda kuziva uye achiziva kuti iwe kurega kurota kwenyu kwose kuti vave navo. Ndinofunga kuti zvimwe sei ndaiziva nokuti ndiri chinzvimbo chaizvo uye wokupedzisira chinhu chandinoda rinofanira akasungirirwa pasi muduku asi kana iye vangadai vaida ini shure uye aida kugara pasi Ndinoziva panguva ndinoda kwaari chandiratidza handidi kuita kuti mumwe nomumwe.
Kutaura About Kwavari Nguva Dzose
Izvi yakaoma nokuti une ichi pamusoro vanhu mune runoputsa pamusoro zvakare asi chinhu ari murudo zvakare. Zvakangofanana kuti zviri kuwedzera zvimwe zvinhu pamusoro nyora ichi kana uri murudo vachiramba kare vainakidzwa. Ndinoyeuka kutaura chaizvo hanzvadzi yangu pamusoro mukomana ndaiva murudo pamwe. Handina kumuudza asi iye aiziva. Anobvuma akaita mazera pashure nokuti ndaisakwanisa rakapfigwa-up sei anoshamisa akanga, sei shamisa akanga, mhando sei akanga, iye neni sei vaizoenda anosanganisira, iye anonyara munhu, kukurukura.
Aratidza Over Happy By Kwavari ndikuratidze Attention
Ehe, unogona kuwana mufaro chaizvo nemunhu iwe Zvinosetsa kuratidza chero wechinhu hanya asi kana uchida mumwe munhu zviri kupfuura kuti. It anonzwa zvishoma rakaita kubatana. Muupenyu hwavo vakataura kwamuri! Ndezvipi zvinoita zvishoma kusuruvara asi zvechisikigo kana uchida mumwe munhu nokuti munoona vave vakakwana apo iwe havaoni pachako sezvo akakwana. Zvino vakati taura zita renyu zvinoita seboka korasi. Kufanana zvikuru chinhu waita akambonzwa. Zvino ndinoti chokuita kunogona zvichibvira kudanana kubatana asi kana zviri rusina kukwana mberi, inogona kuva ushamwari kubatana. The ndechokuti kana vasingagari vanokuda shure asi munovada uchiri kuda kwavo muupenyu hwako neimwe kugona uye zviri pachena kuti nharo kana kuti aizova healthiest mamiriro ezvinhu munyika asi zviri pachena sei manzwiro evanhu tichitamba basa.
Pane igomba achipanga kuva kambani yavo uye kana uchifunga kuti aisazovaona zvakare pane kunzwa chinhu ichi mukati. Hazvina torturous chaizvo. Zvadaro kana uine zvinwiwa shoma, naro kunowedzera. Ukatanga kuchema. Uye iwe zvichida haana kunzwa saizvozvo pamusoro apwanye. Ndicho chinhu manzwiro asina muupenyu hwenyu uye achifunga upenyu hwako amuri kuva wakakwana pasina pavo. Kufanana zviri nehafu upenyu. Zvose wazviita musingadi basa. Asi imi nepariri. Zviri refu mugwagwa asi iwe buda mhiri.